Guriceel: Ciidamada Gor-Gor oo laga cabanayo | KEYDMEDIA ENGLISH
GURICEEL, Soomaaliya - Waxaa aad u siyaaday walaaca amni ee ay shacabka Guriceel ka muujinayaan joogitaanka ciidamada Gor-Gor ee degmadaas, kuwaa oo halkaas loo geeyey in ay ka saaraan Ahlu Sunna.
Shacabka ayaa ka cabanaya, dhac iyo jirdil ay dadka u geysanayaan ciidamada Gor-Gor, ee ku sugan guriceel, taa oo sababtay in maalmahan ay xumaato amniga degmadaas, oo ka mid ahayd meelaha ugu nabdoon gobolada dhexe.
Ciidamada Gor-Gor ee degmada la geeyey, ayaa xilliyada habeenkii ah dhalinyarada ka dhaca taleefanada, iyagoo sidoo kalana xoog jaadka uga qaata haweenka ka ganacsada, kuwaa oo badankooda ku koriya caruur agoon ah.
Ciidamada gorgor ayaa labadii habeen ee ugu danbeysay, bililiqeystay in ka badan 10 dukaan, waxaana ganacsatada goobahaas leh ay cabashadooda u gudbiyeen saldhiga booliska Guriceel, kaas oo iminka wada baaritaan uu ku raadinayo kuwii falkaasi ka danbeeyey.
Arrintan walaaca ah ayaa kala qeybisay ciidamada booliska oo ah kuwa deggaanka ka soo jeeda iyo ciidanka gorgor ee ay Fahad iyo Farmaajo keeneen Guriceel, waxaana bishan gudaheeda ay ku dagaallameen gudaha degmadaas, kadib markii ay korortay cabashada soo gaareysa taliska booliska Guriceel.
Falalka ka dhacaya Guriceel, ayaa bidhaaminaya inuu guuleystay qorshihii Farmaajo iyo Fahad, ee ku aaddanaa in ay lumiyaan amniga Guriceel, oo laf dhabar ganacsi sanadihii ugu danbeeyey u ahayd Galmudug, waana tallaabo sidoo kale iftiimineysa, fashilka weyn ee ku yimid xukunka Qoor-qoor, oo ah nin isku dhiibay, maafiyada sifada sharci darrada ah ku fadhisa, kursiga ugu sareeya dalka.